Peixin dia nandray anjara tamin'ny Non Woven Tech Asia 2019 tany Delhi, India | PEIXIN
Nanomboka ny faha-6 jona ka hatramin'ny 8 jona, ny Non Woven Tech Asia Fair dia natao tao Delhi. Amin'ny maha-mpamatsy iray matihanina indrindra azy, ny Vondrona PEIXIN dia lasa malaza kokoa. Faly be izahay satria nahazo fijinjana lehibe. Betsaka ny olona mahafantatra momba antsika ary mampiseho fahalianana amin'ny milina. Ary hankasitraka be ny fanohananareo.
Miaraka amin'ny mpitsidika mihoatra ny 19000, ny Nonwoven Tech Asia no toerana mety hifandraisana amin'ireo mpanjifa vaovao na kojakoja sy fampisehoana, hampiroborobo sy mamorona fahatsiarovana izay ho tombontsoa ho an'ny indostrian'ny tsy misy.
Ny indostria nonwoven ho 'NEXT GEN PRODUCT' dia fizarana fiposahan'ny masoandro amin'ny indostrian'ny fitafy lamba. Mipoitra i India ho mpilalao lehibe amin'ny indostria tsy roa. Ny Indostrian'ny Nonwoven tato ho ato dia niseho toy ny toerana fampiasa amin'ny fampiasam-bola malaza indrindra any India ary manana tombony lehibe amin'ny resaka fampitomboana ny sandan'ny famatsiam-bola any India.
Mirosoa Up Machine , mando mamafa Machine , Daily fidiovana Machine , Lady pad Machine , Mini pad Production-dalana , Panty Liner Production-dalana .